बले र प्रिज्माको ‘ब्रेक-अप’ भएको हो ? बिहेको कुरा नमिल्दा…
काठमाडौं : पछिल्लो समय सागर लम्साल बले र प्रिज्मा खतिवडा पुनः च’र्चामा छन् । टीकटकबाट उदाएकी प्रिज्मा र भद्रगोल टिभी सिरियलबाट उदाएका बले केही वर्षदेखि प्रेममा रहेको चर्चा थियो ।
उनीहरुले म्युजिक भिडिओ पनि सँगै गरेका छन् । फागुनमा बिहे गर्ने च’र्चा पनि थियो । प्रेममा रहेको च’र्चा चलेपनि यी दुईले आफूहरु प्रेममा रहेको खबरलाई स्वीकार गरेनन् । यतिबेला भने यी दुई अलग भएको च’र्चा चलेको छ ।
प्रायः सामाजिक संजालमा सँगै देखिने उनीहरु पछिल्लो समय भने एकअर्कासँगको भिडिओ पोस्ट गरेका छैनन् । उनीहरु म्युजिक भिडिओमा पनि सँगै देखिन छाडेका छन् ।उनीहरु अहिले अलग भएको जनाइएको छ । स्रोतले बिहेको कुरा नमिल्दा सम्बन्धमा दरार आएको दावी गरेको छ ।
तर, यी दुईजना अहिले पनि आफूहरुको सम्बन्धलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । ब्रेक’अपको हल्लाबारे सोधिएको जिज्ञासामा प्रिज्माले भनिन्, ‘ब्रेक’अप हुन त पहिले रिलेसनमा बसेको हुनुप¥र्‍यो नि ।
उहाँसँग को-आर्टि’स्टको सम्बन्ध मात्र हो । उहाँ (बले)लाई सँधै सर भनेर बोलाएकी छु । नभएको सम्बन्ध कसरी ब्रेक’अप भयो ? म्युजिक भिडिओ आयो भनेर भविष्यमा नगर्ने कुरै छैन ।-यो खबर नेपाल प्रेसमा प्रकाशित छ ।
२०७८ मंसिर ९, बिहीबार १६:२२ 1 Minute 245 Views